Izidingo Zamanzi Zezingulube - eNingizimu Afrika
Izidingo Zamanzi Zezingulube
Amanzi avame ukushiywa phansi uma kuziwa ekukhiqizeni ingulube, kodwa empeleni kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ngenxa yendima yawo emisebenzini yomzimba yomzimba. Ukuze uthole impilo enhle, amanzi ahlanzekile okuphuza ahlanzekile kufanele atholakale kuzo zonke izingulube ngezikhathi zonke, ngakho angaphuza amanzi amaningi njengoba efuna, noma nini lapho efuna khona.
Ikhwalithi yamanzi, izimo zezulu kanye nesigaba sokukhiqiza kufanele kucatshangelwe uma kucatshangwa izidingo zamanzi zezingulube.
Imfanelo yamanzi kufanele ihlolwe njalo ngonyaka, ngakho-ke izinyathelo zokulungisa zingathathwa uma kunesidingo. Umthombo wamanzi uvame ukucacisa ikhwalithi kanye nokufaneleka kwamanzi ezingulube, kungaba yidamu, amanzi omasipala noma amanzi. Okulandelayo kufanele kuhlaziywe:
Isibalo sebhaktheriya: Ukwelashwa kwe-chlorine Kunconywa uma inani labaktheriya liphakeme. Khumbula ukuthi imigqa engcolile yamanzi nabaphuzayo ingabangela izinkinga zebhaktheriya, ngakho-ke kubalulekile ukuhlanza njalo nabaphuzi abahlanzekile nemigqa yamanzi.
I-esidi: Amazinga e-pH wamanzi kufanele aphakathi kuka-5 no-8. Noma yini engaphezulu noma engaphansi kwalokhu, ingathinta ukufaka kwamanzi futhi ingaba yingozi. Amanzi acacc (ngaphansi kuka-5), angabangela ukubola nokulimaza amapayipi nemigqa yamanzi, kanti amanzi anesimo saline angashiya imali egciniwe yokuvimbela amapayipi nomphuzi, okudinga ukuqhuma kwemigqa kaningi.
Ukuqina: I-calcium ne-magnesium yiwona amaminerali amakhulu angenza amanzi "kanzima". Ukunciphisa amanzi kungasetshenziselwa ukunciphisa amanzi.
I-nitrate ephezulu, ama-sulfati namanye amaminerali: Ukudla kwezingulube kufanele kulungiswe ukuze kutholakale amazinga aphezulu amakhemikhali namaminerali athile. Amanzi angase aphinde ahlungwe noma aphathwe ngaphambi kokuba anikezwe izingulube, okungaphansi kwezimo ezithile ezinganikeza ukukhiqiza okungenzi inzuzo.
Amanzi amaningi adingekayo nsuku zonke ancike ezintweni eziningi, kufaka phakathi izimo zezulu, ukudla, isigaba sezempilo kanye nokukhiqizwa kwezingulube kanye nohlobo lwabaphuzi abasebenzisa.
Ezimweni eziningi zokukhiqiza, ingulube ingadinga okungenani ama-alitha ayisihlanu kuya kwayishumi amanzi ngosuku, kanti izidingo zamanzi nsuku zonke zingase zibe ngaphansi kwama-2 amalitha ngengulube ngosuku ngosuku lwezingulube ezisanda kuncibilika ezingaphezu kuka-6 amalitha ngengulube ngosuku ngosuku lokukhula- izingulube eziqedile zisebenzisa iziphuzo zeziphuzo. Ukuhlwanyela ukondla intsha kudinga ukuphuza amanzi angaphezulu ukukhiqiza ubisi obanele, kanti izidingo zazo zamanzi ziphakathi kuka-15 kuya ku-32 amalitha ngosuku ohlelweni lokuphuza, uma izidingo zamanzi zokuhlwanyela izidakamizwa ziphakathi kwama-12 kuya ku-15 amalitha ngosuku.
Amanzi kufanele aphuze, ngaphandle kwalokho izingulube ngeke ziphuze. Ngakho gcina amanzi endaweni enomthunzi. Iziqukathi zamanzi kufanele zihlanganiswe nokuthunyelwe noma ukugoba emhlabathini ukuvimbela ukuthi ingaguquki futhi kufanele ihlanzwe njalo. Umqondo ovamile wukuthi izinga lamanzi kufanele lifanele ukuxoshwa komuntu futhi abaphuza kufanele bahlanzeke ngokwanele ukuthi umlimi angeke agxilise ukuphuza kuso.
Bambalwa abalimi abanikezela ngezingulube zabo zodaka, kodwa litholakala ukusiza ngomthetho wokushisa. Kungabonakala ukuthi kunciphisa izinga lokushisa kwezingulube nge-2 degrees Celsius, okwenze kube ngcono nakakhulu kunokuthuthumela okulukhuni izingulube njengoba bengenayo izigulane ze-sweat. Ukuguqa ngodaka nakho kusiza ukugcina ama-parasites, njengama-ticks kanye ne-lice esheke, kodwa akufanele kubonakale njengengxenye yezokwelapha lapho kuphakama izinkinga. Ngaphezu kwalokho, ukugoqa odakeni kuyindlela yokuziphatha yesilwane, abanye abantu abakubonayo njengengxenye yezenhlalakahle zezilwane.